Tag: racfaan | Martech Zone
Sanado ka hor, waxaan u haajiray otomaatigeyga suuqgeynteyda oo aan aaday meel caan ah oo si ballaaran loo yaqaan (oo aan ahayn Salesforce). Kooxdaydu waxay qaabeeyeen oo ay soo saareen dhowr olole oo kobcin ah runtiina waxaan bilownay inaan wadno xoogaa ka mid ah taraafikada hogaanka… ilaa ay musiibo ku dhacday. Madalku waxay samaynaysay casriyeyn weyn waxayna si kadis ah u tirtirtay tiro ka mid ah xogta macaamiisha, oo ay ku jiraan kuweena. In kasta oo shirkaddu lahayd heshiis heer adeeg ah (SLA) oo dammaanad qaadaya waqtiga shaqada, haddana ma lahayn keyd
Loop & Tie: Hadiyadaha Gaarsiinta B2B Hada Waa Aaladda Iibinta ee Suuqa Suuqa Bedelka
Jimce, Maarso 26, 2021 Jimce, Maarso 26, 2021 Douglas Karr
Cashar aan sii wado inaan dadka ku barto suuqgeynta B2B ayaa ah iibsigu wali waa shaqsiyan, xitaa marka lala shaqeynayo ururo waaweyn. Go'aan-qaatayaashu waxay ka walaacsan yihiin shaqooyinkooda, heerarkooda culeyska fekerka, muggooda shaqadooda, iyo xitaa raaxaysigooda maalinlaha ah ee shaqadooda. Adeeg ahaan B2B ama adeeg bixiye, waayo-aragnimada la shaqeynta hay'addaada ayaa inta badan ka miisaan badnaan doonta wax-soo-saarka dhabta ah. Markii aan bilaabay ganacsigeyga, aad baan ula yaabay arintan. Aniga
Adeegsiga Tijaabinta otomaatiga ah si loo hagaajiyo Khibrada Iibsiga
Talaado, Agoosto 4, 2020 Talaado, Agoosto 4, 2020 Mahendra Alladi
Joogitaanka ka hor isbeddelka degdegga ah iyo soo noqnoqoshada ee meherad ballaadhan oo ballaadhan, sida Salesforce, ayaa noqon karta caqabad. Laakiin Salesforce iyo AccelQ way wada shaqeynayaan si ay ula kulmaan caqabadaas. Isticmaalka barnaamijka maareynta tayada degdega ah ee 'AccelQ', oo si adag ugu dhexjira Salesforce, wuxuu si weyn u dardar geliyaa una hagaajiyaa tayada sii deynta urur ee Salesforce. AccelQ waa shirkado madal wada shaqeyn ah oo u adeegsan kara otomaatigga, maareynta, fulinta, iyo raadinta tijaabinta Salesforce. AccelQ waa imtixaanka kaliya ee joogtada ah
Wareysiga Fiidiyowgu wuxuu u socdaa Guud ahaan Websaydhada Shirkadaha iyo Istaraatiijiyadaha Ganacsiga
Wednesday, September 26, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Salesforce waxay daabacday maqaal faahfaahsan iyo faahfaahin muuqaal ah oo ku saabsan saameynta iyo dhaqamada ugu fiican ee sheekeysiga fiidiyowga ee adeegga macaamiisha. Kanaalkaan adeegga macaamiisha wuxuu isku daraa habboonaanta wada sheekaysiga tooska ah iyo wicitaanka taleefanka oo leh taabashada shakhsi ahaaneed ee fiidiyowga. Iyada oo la adeegsanayo baaxad ballaadhan, 5G waxay xawaareysaa hareeraha geeska, iyo xoojinta muhiimka ah ee teknoolojiyada isgaarsiinta fiidiyowga, shaki kuma jiro in sheekada fiidiyowga ay ku sii kordheyso saameynta. Gartner wuxuu ku qiyaasayaa in ka badan 100 ka mid ah
Isniin, November 17, 2014 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Bizible wuxuu kuu ogolaanayaa inaad falanqeyso waxqabadka Adwords-kaaga oo ku saleysan beddelaad halkii aad riixi lahayd, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si gaar ah ula shaqeyso Salesforce si loo cabbiro waxqabadka ku saleysan ololaha, kooxda xayeysiinta, xayeysiiska, iyo heerka erayga. Maaddaama Bizible uu la shaqeynayo raadinta ololaha hadda ee Google Analytics, waxaad si fudud ula socon kartaa kanaal fara badan oo ku baahsan raadinta, bulshada, lacag bixinta, emaylka iyo ololeyaasha kale. Astaamaha Muhiimka ah ee ku qoran barta Bizible ee AdWords ROI - waxay kuu oggolaaneysaa inaad qoto dheer ku gasho AdWords